24 xiiso leh oo ku saabsan Antarctica | Saadaasha Shabakadda
24 xiisaha ku saabsan Antarctica
La Antarctica waa qaarad, tan iyo markii la ogaaday (oo la rumeysan yahay inay ahayd sanadkii 1603), ay soo jiidatay indhaha aadanaha. Iyada oo lagu xisaabtamayo in dhulku uu yahay mid wareega, isla markaana wakhtigaas horeba loo ogaa in Waqooyiga Pole, oo aad ugu dhow gobolka polar, ay jiraan aagag qaaradeed oo uu ku daboolay baraf, si macquul ah waa in ay u muuqataa wax la mid ah Pole South.
Qarnigii siddeed iyo tobnaad, Isbaanishka iyo Koonfurta Ameerika waxay bilaabeen inay xagaaga ku qaataan halkaas, in kasta oo ay wali qaadanayso qarniga kale inta dhimatay inay ogaadaan jiritaanka qaaraddaan cajiibka ah, ee lamadegaankaan weyn. Halkaas, Antarctica waxay si tartiib tartiib ah u soo bandhigtay waxyaalaheeda qarsoon, laakiin ... hubaal waxaa jira ugu yaraan 24 waxyaabo aadan ka ogeyn. 24 xiisaha xiisaha leh ee ku saabsan Antarctica oo kaa yaabin doonta adiga.
Sawir - Christopher Michel
Antarctica waa lamadegaanka ugu weyn adduunka, oo aan ka badnayn kana yaraan 14,2 milyan km2. Kordhin la yaab leh, miyaadan u malayn?
Halkan kama heli doontid xamaarato nooc kasta oo ay tahay. Waa qaaradda kaliya ee aan jirin.
Sababta aad halkaan uga heli doontid xayawaankan, iyo sababta nolosha halkan ugu cakiran tahay xitaa haddii aad tahay qof diirran oo dhiig qaba, waa sababta oo ah heerkulka ugu hooseeya ilaa taariikhda ayaa la duubay. Waa kuwee? -93,2ºC. Xaqiiqdi inbadan oo idinka kamid ah ayaa jeclaan lahaa inaad yeelato xoogaa maraq kulul, sax?
Kama shaqeyn kartid Antarctica illaa iyo inta laga fogeeyay garaadkaaga ilkaha iyo lifaaqa. Waa wax lagu qoslo, saw maaha? Laakiin si kastaba ha noqotee, uma baahnin labadaas qaybood ee jirka gabi ahaanba. Ta hore marka ay soo baxdo, haddii ay soo baxdo, waxay keentaa xanuun badan, tan kale markay bilowdo inay shido waxay noqon kartaa isha bakteeriyada.
Inkasta oo loogu yeero bears polar, dhab ahaan waxaad ku arki doontaa iyaga oo kaliya arctic. Antarctica, si kastaba ha noqotee, waxaad ku arki doontaa penguins badan, sida tijaabada wanaagsan ee sawirka kore.
Sawir - Lin padgham
Haddii aad u maleyneysay inay jiraan fulkaano firfircoon oo keliya oo ka jira gobollada diiran iyo kuwa dhexdhexaadka ah ... waad khaldanayd. Antarctica sidoo kale fulkaano ayaa ka jirta. Waana mid firfircoon. Waa midka ku sii yaal koonfurta. Ayaa lagu magacaabay Buurta Erebus, oo erya kiristaalo.
Sawir - 23am.com
hay Harooyinka 300 ee aan barafoobin qaaraddan. Ma jeclaan laheyd inaad quusin Maya, ma kaftamayo.
Heerkulka ugu sarreeya ee abid laga diiwaan geliyo Antarctica wuxuu ahaa 14,5ºC.
Sawir - Peter rejcek
Ma jiraa qayb ka mid ah qaaraddan meesha ma da’in roob ma da’in gabi ahaanba waxba malahan 2-dii sano ee la soo dhaafay.
Laakiin waxaa jira indho fiiqis. Kuwa aan qiyaaseyno waa biyo hufan, laakiin halkan waxaa jira mid guduudan.
Saynisyahan ku takhasusay Antarctica ayaa la aqal gali kara gabadhiisa kaliya Daqiiqado 45.
Ku noolaanshaha halkan waa caqabad weyn. Ma qaaradda ka qabow, windier, qalalan iyo ka sareeya (waxay ka sarreysaa 2000m heerka badda) adduunka. Weli, waxaa jira bini aadam ku nool Antarctica.
Laakiin jadwal ma jiro. Dhab ahaan, Antarctica ma laha jadwal.
Mar, 52 milyan sano ka hor, Waxay u kululaatay sida Kaliforniya oo kale maanta. Waxay ku taallay keyn kuleyl ah sida kuwa ku yaal gobolka Amazon, ama Koonfur-bari Aasiya. Qof kasta ayaa oran lahaa hadda, sax?
Sawir - Xaqiiqooyinka
Hadaad mu'min tahay, waa inaad ogaataa inuu jiro toddobo kaniisadood oo masiixi ah gudaha Antarctica.
Antarctica waxay leedahay oo keliya 1 ATM, taas oo ah 1,01325 bar, ama 101325 pascals.
Iyo inkasta oo ay dhib tahay waligeed roobab, 90% oo biyo macaan waa halkaan. Haa, barafoobay Laakiin natiijada kululaynta adduunka awgeed, haddii badaha dhalaasho waxay kici karaan dhowr mitir ...
Dadku had iyo jeer waxay iskudayeen (welina sii wadaan) inay gumeystaan ​​meelaha iyo dhulal, xitaa kuwa ugu liita. Aad ayey u badan tahay in 1977 Argentina u dirtay hooyo uur leh Antarctica si ay ugu dhasho halkaas, iyada oo ujeedadu tahay oo keliya inay awoodo inay sheegato qayb ka mid ah qaaradda. Wuxuu ahaa bini’aadamkii ugu horreeyay ee ku dhasha Antarctica.
In kasta oo dunida loo imanayo meel meesha dabayshu waxay qaadi kartaa ilaa 320km / saacaddiiA Waa caqabad.
Barafkii ugu weynaa ee abid la cabiro ayaa ka weyn Jamaica: 11,000km2. Laakiin waxay ka go'day dhulweynaha 2000.
Inta badan qaaradda ayaa si joogto ah ugu daboolan baraf, marka laga reebo wadarta 1%, halka ay ku dhalaasho imaatinka Iftiinka Polar (waa maxay
kaas oo guga u noqon lahaa lamadegaan barafoobay).
Dhalashada wuxuu sababay isbadal culeyska culeyska ee gobolka.
Celceliska dhumucda barafka Antarctica waa qiyaastii 1,6km.
Chile waa magaalada kaliya ee halkan ku nool. Waxay leeyihiin iskuul, xafiiska boostada, isbitaal, internet, iyo teleefoonka gacanta.
Hadda waxaad ka ogtahay waxyaabo yar oo ku saabsan qaaraddan quruxda badan iyo barafoobay. Maxay kula tahay
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Sawirro » 24 xiisaha ku saabsan Antarctica